China ukuqhumisa umshini izingxenye ezisele ifektri abakhiqizi | TAA
Izingxenye zomshini wokuqhumisa kufaka phakathi: imigwaqo yamasondo, impeller, icala lempepho, amaveni endiza, ikhanda lempepho, ipuleti lonogada, amapuleti olayini njalo njalo.
Iyatholakala Izingxenye zezinto ezingasebenzi
Okuqukethwe kwe-Cr-12%, 20%, 25% noma njengesicelo.
Inqubo yobuchwepheshe obuthuthukile & besayensi.
Ukusebenza kahle okuphezulu kanye nomugqa wokukhiqiza owenziwe othomathikhi ozenzakalelayo.
Special high chromium nemihuzuko ekubunjweni izingxenye zensimbi ezisele, okwenza izikhala embonini yasekhaya.
Izingxenye Zokusebenza Zokuqala Ezenziwe (i-OEM) ziyatholakala.
Siphinde sinikeze izingxenye zekhwalithi yangemva kwemakethe yeminye imishini yomkhiqizo.
Langaphambilini Amasondo wokuqhuma
Olandelayo: Ukusika uchungechunge lwe-disc FS-01
Ukuqhumisa Umshini Izingxenye elingasebenzi
Liner Cover Avikelayo
Izinhlelo Zokuvikela I-Liner Systems
Avikelayo Shelf Liner
I-Side Guard Plate
Izingxenye elingasebenzi Of Machine ukuqhumisa
Plates Side Side
Ipuleti Eliphezulu Labaqaphi
Izinzuzo zomshini wokudubula umshini wokudubula onokwethenjelwa Ubuchwepheshe Bokuqhumisa: Imishini yokuqhuma yesigubhu yenziwa ngokuhlukahluka okuhlukahlukene, izinhlobo nosayizi. Zihlangene futhi zinezinyathelo ezincane kakhulu. Ukuhamba okuqhubekayo kungatholakala ngokuxhumanisa imishini eminingana. Isakhiwo esivumelana nokulungiswa: Ukugcinwa njalo kubalulekile ekulondolozeni inani lesikhathi eside semishini. Izinsizakalo ezinkulu kanye neminyango yokuhlola inikezela kalula ...
Izinzuzo zemishini yokuqhuma yebhande le-AGTOS yerabha ethembekile Ubuchwepheshe bokuqhumisa obunokwethenjelwa Ubuchwepheshe bokuhlunga obusha Izinto eziningi ezahlukahlukene ezishintshayo ezizenzekelayo ngokuvumelanisa nohlelo lwangaphakathi lwezokuthutha. Ama-turbine wokusebenza okuphezulu we-AGTOS: Ama-turbines ethu ayizingcezu zomshini eziqinile, ezakhiwe kahle. Ngenxa yenani elincane lezingxenye zokugqoka nokufakwa okuphezulu okunamandla, zisebenza ngokwezomnotho ngokweqile. Eziningi d ...
Isondo eliqhuma kakhulu le-TAA lizibonakalisile emakethe ukuthi liqinile, lisebenza kahle kwezomnotho futhi lilungele ukugcinwa. Atholakala ngamadayimitha ahlukene ophephela ophephela kanye nezinto zokungcebeleka ezahlukahlukene (isb. Insimbi eqinile). Amasondo we-TAA wokuqhuma okuphezulu athandwa kakhulu ekuvuseleleni imishini ejwayelekile yokuqhumisa. Izici Zomkhiqizo Kuthuthukisa isivinini sokuqhuma kwesibhamu ngokusobala Ukumelana okuhle kokugqoka Ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ...
Okuqhubekayo Overhead Rail Shot Blast Machines
Izinzuzo zomshini wokuqhumisa umkhondo wokudlula ngomkhondo * Ubuchwepheshe bokuqhumisa obunokwethenjelwa: Amayunithi ethu ophephela wokusebenza aphezulu athembekile kakhulu. Zisebenza kahle kakhulu ngenxa yenani eliphansi lezingubo ezigqokiwe, ukwakheka okulungele ukugcinwa kanye nokugeleza okuphezulu kwe-abrasive. * Ukugcinwa okuphansi: Ukugcinwa njalo kusiza ukugcina inani lemishini. Iminyango yesondlo emikhulu inikezela ukufinyelela okulula kuzo zonke izinto ezibalulekile futhi yenza lula ukufaka esikhundleni esisheshayo ...
Roller elihambayo wadubula kuqhuma imishini
Izinzuzo ezibalulekile ubuchwepheshe bokuqhumisa be-AGTOS: Ama-turbine ethu ayizingxenye zamandla ezinamandla ezibiza kakhulu ngenxa yezingxenye ezimbalwa zokugqoka kanye ne-flfl ow ephezulu kakhulu. Kulula ukugcina ubuchwepheshe bokuhlunga obusha buqinisekisa ngokusebenza okunamandla. Ukuzenzekelayo Ukuqhumisa kwe-flfl ame okusikiwe kubhasikidi ukuqhumisa imishini ...
Njengomthetho, imishini yokuqhuma yohlobo lwe-hanger ihlinzekelwa i-batch noma ukucubungula okuqhubekayo. Kodwa-ke, kunemiklamo eminingi emaphakathi eqondiswe ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezinhlelo zokuhambisa ngaphezulu. Ezimweni eziningi, izinqubo ezahlukahlukene njengokuqhumisa, ukudweba nokumisa okulandelayo kungaxhunyaniswa ngohlelo lokuhambisa ngaphezulu. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuthepha amandla amakhulu wokuhlehlisa ukuhamba komsebenzi wenqubo. Ukuhlukahluka kokucubungula ...